လင်းဇော်ထိုက်: April 2013
Posted by linnzawhtike at 4/19/20130comments
ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဖျာပုံမြို့ဇာတိဖြစ်၍ အဖဦးယော၊ အမိဒေါ်စိန်ညွန့်တို့မှ ၁၉၀၇-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ကိုးယောက် အနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ အမည် ရင်းမှာ ဦးသိန်းဟန် ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ငယ်စဉ်က ဖျာပုံမြို့ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် ပညာ သင်ကြား ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဖျာပုံမြို့ရှိ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်းတွင် သတ္တမတန်း အထိ... ပညာ သင်ကြား ခဲ့သည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ငယ်စဉ် ကလေးဘ၀ ကတည်းက မြန်မာမှု၊ မြန်မာ စာပေ တို့နှင့် အကျွမ်းတ၀င် ရင်းနှီး ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ဆရာ ဇော်ဂျီတို့ အိမ်တွင် လူကြီးများ စုဝေးကာ စာအကြောင်း ပေအကြောင်း ပြောကြ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သတ္တမတန်း အရောက်တွင် ၁၉၂ဝ ပြည့် ပထမ ကျောင်းသား သပိတ်တွင် ပါဝင် ခဲ့သည်။ အမျိုးသား ကျောင်းများ မြန်မာပြည် အနှံ့ ပေါ်ပေါက် လာသော အခါ ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ဖျာပုံမြို့၊ အမျိုးသား ကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ ပညာ ဆည်းပူး ခဲ့သည်။ ထိုမှ တဖန် ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့မ ကျောင်းသို့ ပြောင်း၍ ၁၁ ဆင့် အောင်သည် အထိ ပညာ ဆည်းပူး ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးမှာ ဦးဘလွင် ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၂၄ တွင် ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းနှင့် မြို့မ အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းတို့တွင် ပညာ သင်ကြား ခဲ့သည်။ မြို့မ ကျောင်းသား ဘ၀တွင် ကဗျာများ စတင် ရေးသား ခဲ့သည်။ ၁၉၂၄ တွင် ဆာဂျေအေ မောင်ကြီး၏ သစ္စာ ၀ါဒီ သတင်းစာက ကြီးမှူးပြီး ကဗျာ ဘာသာပြန် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ ခဲ့သည်။ မြန်မာ ဘာသာသို့ ပြန်ဆို ရမည့် ကဗျာမှာ အင်္ဂလိပ် ကဗျာ ဆရာ ဟင်နရီ ဝေါတန် (Henry Wotton) ၏ The Character ofaHappy Life အမည်ရှိ ကဗျာ ဖြစ်သည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ကဗျာ ပြိုင်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရာ ပထမဆု ရရှိ ခဲ့သည်။ ဆာဂျေအေ မောင်ကြီးက ရွှေဒင်္ဂါး ၅ ပြား ဆုချ ခဲ့သည်။ ၁၉၂၅ တွင် ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက် ပညာ သင်ကြား ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်သို့ ရောက်သောအခါ ရှေးဟောင်း မြန်မာ့ စာပေကို စနစ်တကျ လေ့လာခွင့် ရသကဲ့သို့ တဘက်တွင်လည်း ကမ္ဘာ့ စာပေ များကိုလည်း ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လိုက်စား နိုင်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ် ကဗျာများကို ဖတ်ပြီး ကဗျာသစ်ကို စမ်းသပ် ရေးဖွဲ့ချင်စိတ် ပေါက်လာသည်။ ၁၉၂၈ တွင် ဆရာ ဇော်ဂျီသည် သူ၏ နာမည်ကျော် “ပိတောက်ပန်း” ကဗျာကို ရေးဖွဲ့ ခဲ့သည်။
ဆရာ ဇော်ဂျီသည် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀တွင် သူ့လို ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်း ဆရာ မင်းသုဝဏ်နှင့် တွဲမိ သွားသည်။ သူတို့ နှစ်ဦးသည် ရှေးဟောင်း ကဗျာများမှ တွေးပုံ တွေးနည်း၊ ရေးပုံ ရေးနည်း များကို လမ်းသစ် ခွဲထွက် ကြသည်။ မိမိ ခံစားရသော အမြင်ကိုသာ အလှပဆုံး၊ အထိမိဆုံး ရေးဖွဲ့ ကြသည်။ ထို ကဗျာများကို တက္က သိုလ် မဂ္ဂဇင်း၊ ဂန္တလောက မဂ္ဂဇင်း၊ ကြီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းများတွင် ရေးသား ကြသည်။
၁၉၃၄ တွင် ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်က ဆရာ ဇော်ဂျီ၊ ဆရာ မင်းသုဝဏ်နှင့် တက္ကသိုလ် ပုရ၀ဏ် အတွင်း ရေးသား နေကြသော ကဗျာ များကို စုစည်း ထုတ်ဝေရာမှ ‘ခေတ်စမ်း ကဗျာ’ ဟု အမည် တွင်လာသည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀တွင် တက္က သိုလ် ပုရ၀ဏ် ထဲမှ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်၊ ဆရာပွား၊ ပါမောက္ခ လုစ်၊ ပါမောက္ခ ဂုဒ်တို့ထံမှ အင်္ဂလိပ် စာပေ၊ မြန်မာ စာပေတို့ကို လေ့လာ ဆည်းပူးခွင့် ရခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် ပြင်ပ စာပေ လောကမှလည်း ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ အမျိုးသား ပညာဝန် ဦးဖိုးကျား၊ ဒီးဒုတ် ဦးဘချို တို့ထံမှ ပြင်ပ စာပေ ဗဟုသုတ များကို ကြားနာခွင့် ရသည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီသည် မိမိထက် အတန်းကြီးသော သိပ္ပံ မောင်ဝထံမှ အက်ဆေး သဘောတရားများ၊ ဗဟုသုတများ ရရှိခဲ့ပြီး မိမိထက် ငယ်သော ဆရာ မင်းသုဝဏ် နှင့်လည်း ကဗျာ ရေးဖော် ရေးဖက် ဖြစ်လာသည်။
ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ၁၉၂၉-၃ဝ ပညာသင် နှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇဘွဲ့ ရခဲ့သည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီသည် မိမိ ပညာ ဆည်းပူး ခဲ့ရာ မြို့မ အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းတွင် အထက်တန်းပြ ဆရာ အဖြစ် ၁၉၃၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၃၄ ခုနှစ် အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းဆရာ လုပ်နေစဉ် မှာပင် ဖျာပုံမြို့ ကနေ ၁၉၃၁ ဇန်နဝါရီလက စပြီး ထုတ်ဝေ ခဲ့တဲ့ ‘မြန်မာ့ အာဇာနည်’ ဂျာနယ်မှာ ဆရာ ဇော်ဂျီသည် အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဂျာနယ်သည် အမှတ် ၇ မျှသာ ရေးသား ထုတ်ဝေ ခဲ့နိုင်ပြီး ဖြန့်ချိမှု အခက်အခဲကြောင့် ရပ်ဆိုင်း ခဲ့ရသည်။၁ မြို့မကျောင်း ကျောင်းဆရာ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေစဉ် ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ဝိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းကြီးက ကြီးမှူး ကျင်းပသော ဟောပြောပွဲတွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် စာပေ ဝေဖန်ရေး စာတမ်း တစ်စောင် ဖတ်ကြား တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။ စာဆို ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာနှင့် စိန္ထကျော်သူ ဦးသြ တို့အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာတမ်း အမည်မှာ ‘Eighteenth Century Poets in Burma’ ဖြစ်ပါသည်။ စာတမ်း တင်သွင်းသော ခုနှစ်မှာ ၁၉၃၂ ခု သြဂုတ်လ ၂၈ ရက် ဖြစ်ပါသည်။ သဘာပတိမှာ ဆရာကြီး ဦးလူဖေဝင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို စာတမ်းကို ရန်ကုန်တိုင်းမ် (Rangoon Time) အင်္ဂလိပ် ဘာသာ သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ခဲ့ပါသည်။ ထို စာတမ်းကို ဖတ်မိသော ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခ ရုခ်က အလွန် နှစ်သက် သဘော ကျ၍ ဆရာ ဇော်ဂျီကို ခေါ်ယူကာ မဟာ ဝိဇ္ဇာတန်း တက်ရန် တိုက်တွန်း ခဲ့လေသည်။ သို့ဖြင့် ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် မြို့မ ကျောင်းမှ ထွက်၍ မဟာ ဝိဇ္ဇာတန်းတွင် အင်္ဂလိပ် စာပေနှင့် မြန်မာ စာပေ နှစ်ဘာသာ (Double Literature) ယူကာ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် မဟာ ဝိဇ္ဇဘွဲ့ ရခဲ့သည်။
၁၉၃၈ ခုနှစ် အထိ မန္တလေး ဥပစာ ကောလိပ်တွင် မြန်မာစာ နည်းပြ အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၃၆-၄ဝ ပြည်နှစ် များတွင် အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ဒဗ်ဗလင် တက္ကသိုလ် များတွင် စာကြည့်တိုက် ပညာ သင်ကြား၍ ဒီပလိုမာဘွဲ့ ရရှိသည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်မှူး တာဝန် ထမ်းဆောင်သည်။ ၁၉၄၁-ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် နေရှင်နယ် အမျိုးသမီး ကျောင်းမှ အထက်တန်းပြ ဆရာမ ဒေါ်စောရင် (ဘီအေ- ဘီအီးဒီ) နှင့် လက်ထပ် ခဲ့သည်။
၁၉၄၂ ခုနှစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း မြန်မာ အစိုးရ၏ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးဝန် (စာပေနှင့် စာကြည့်တိုက် ဌာန) တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်မှူး တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇-၄၈ ခုနှစ် များ၌ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ရုံးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အထူး အရာရှိနှင့် အခြေခံ ဥပဒေ အချောကိုင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဝဏ္ဏ ကျော်ထင်ဘွဲ့ ရရှိသည်။
၁၉၅၁-၅၇ ခုနှစ် များ၌ ကျောင်းသုံး စာအုပ် ပြုစုရေး (ထုတ်လုပ်ရေး) ညွှန်ကြားရေးဝန် တာဝန်နှင့် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၌ မြန်မာ နိုင်ငံ သမိုင်း ကော်မရှင် ဥက္ကဌ တာဝန် များကို ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ၁၉၅၁ တွင် ဆရာ ဇော်ဂျီသည် အစိုးရ ပညာရေး မစ်ရှင်အဖွဲ့ နှင့်အတူ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ မက္ကဆီကို၊ ကနေဒါ နိုင်ငံ များသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် စာကြည့်တိုက်မှူး အဖြစ် ပြန်လည် ထမ်းရွက်သည်။ ၁၉၅၅ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ၁၉၆၁ တွင် တရုတ်နိုင်ငံ များသို့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ချစ်ကြည်ရေး အဖွဲ့နှင့် အတူ သွားရောက် ခဲ့သည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင် မြန်မာစာ ပါမောက္ခ အဖြစ်နှင့် သီရိပျံချီဘွဲ့ ရရှိသည်။
၁၉၆၅ – ၇၅ ခုနှစ် များတွင်ပညာရပ် ဝေါဟာရ ကော်မတီ ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးသား စာပေဆု စိစစ် ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၌ တက္ကသိုလ်များ ဗဟို စာကြည့်တိုက်မှူး အဖြစ်မှ အငြိမ်းစား ယူပြီး ပညာရေး အထူး အရာရှိ (၁)၊ မြန်မာ နိုင်ငံ သုတေသန အသင်း ဥက္ကဌ တာဝန် များကို ထမ်းရွက် ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ သမိုင်း သုတေသန ဦးစီး ဌာန အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ်ပါ တာဝန် ယူခဲ့သည်။
ဆရာ ဇော်ဂျီသည် ‘သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း ဋီကာ’ စာအုပ်ဖြင့် ၁၉၅၅ ခုနှစ် အတွက် စာပေ ဗိမာန် စာပဒေသာ ဆု၊ ‘နင် လားဟဲ့ ချစ်ဒုက္ခနှင့် အခြား ဝတ္ထုတိုများ’ စာအုပ်ဖြင့် ၁၉၇၉ ခုနှစ် အတွက် အမျိုးသား စာပေဆု (ဘာသာပြန် စာပေ)၊ ‘ရှေးခေတ် ပုဂံ ကဗျာများနှင့် အခြား ကဗျာများ’ စာအုပ်ဖြင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ် အတွက် အမျိုးသား စာပေဆု (ကဗျာဆု) တို့ကို ရရှိ ခဲ့သည်။
ဆရာ တက်တိုးက ဆရာ ဇော်ဂျီကို ဒဿန စာဆို (Philosopher Poet) ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ဆရာ မင်းသုဝဏ် ကို သုတေသီ စာဆို (Scholar Poet) ဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုမိန့်ဖူးသည်။
ဆရာ ဇော်ဂျီသည် အသက် (၈၃) နှစ် အရွယ် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဆရာ နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်း မြို့နယ် ကမ္ဘောဇလမ်း အမှတ် (၁ဝ-က) နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။
post By: Moekyashweco
Posted by linnzawhtike at 4/17/20130comments
အမရပူရမြို့နယ်အတွင်းရှိ တောင်တမန်အင်းကို ဖြတ်ကျော်ကာ အမရပူရမြို့ဟောင်းနှင့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကို ဆက်သွယ် တည်ဆောက်ထားသည့် ဦးပိန်တံတားသည် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာကျော် ရှုခင်းကောင်းတစ်ခု၊ အပန်းဖြေလေ့လာရန်နေရာတစ်ခုအဖြစ် ကျော်ကြားပေသည်။ ဦးပိန်တံတားသည် ၁.၂ ကီလိုမီတာ (သို့မဟုတ်) တစ်မိုင် ၏ ၄ ပုံ ၃ ပုံ ရှည်လျား ၍ ကမ္ဘာ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘမှာ အရှည်ဆုံး ကျွန်းသားတံတားဖြစ်သည်။ တံတားဆောက်လုပ်သောနှစ်ကို အင်းက အော်အာ ဆောက်လုပ်ခါ (၁၂၁၁)ဟု၎င်း၊ ပြီးစီးသည့်နှစ်ကို အင်းကအော်ညီး ဆောက်လုပ်ပြီး (၁၂၁၃)ဟုလည်း မှတ်သားထားကြသည်။ တံတားပြီးစီးစက တိုင်ပေါင်း ၉၈၄-တိုင်(န၀ အဋ္ဌဇယမောင်ပိန်) အခန်းပေါင်း ၄၈၂-ခန်းရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှဘုရားများ သမိုင်း မှ ကူးယူမျှဝေပါသည်။(မုန်းမြို့သူ)
Posted by linnzawhtike at 4/11/20130comments
ဆရာတော်ကလည်း ဦးမိုး နားလည်လွယ်စေမည့် တရားအဆုံးအမ ပေးခဲ့သည်။
... ငါးပါးသီလ လုံအောင်ထိန်း၊ ဒုက္ခ ကင်းစေပြီလေ။
"ကိုရင်ကြီး . . အလျင်ဘ၀နဲ့ အခုဘ၀ ခြားနားချက်ကို ကိုယ်တွေ့ ခံစားရပြီ မဟုတ်လား "
"မှန်လှပါ . . တပည့်တော် ကိုယ်တွေ့ခံစားနေရပါပြီ ဘုရား "
" အေး . . . ငါးပါးသီလ လုံခြုံသမျှ ဆင်းရဲသော်မှ လှလှပပတဲ့ . . ကိုရင်ကြီး ငါးပါးသီလ မထိန်းနိုင်ခင်တုန်းကနဲ့ ခုထိန်းနိုင်တော့ ခံစားရတဲ့ စိတ်အေးချမ်းသာပုံကို သဘောပေါက်ပြီ မဟုတ်လား။ စာအသိနဲ့ မပြောနဲ့နော် . . . ကိုယ်တွေ့ ခံစားမှု အသိနဲ့ ပြော "
" မှန်လှပါ။ သိပါပြီ ဆရာတော်ဘုရား "
" ဒါဖြင့် ငါးပါးသီလ ချိုးဖောက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ"
"ဒုက္ခ ပြန်ရောက်ပါ့မယ် ဘုရား "
" အဲ့ဒါ ကြိုးအစပဲ ကိုရင်ကြီး။ ကြိုးအစကို ရပြီးရင် ကြိုးအစ မပျောက် စေနဲ့ "
" တင်ပါ့ ဘုရား "
" သူတစ်ပါးကို မကောင်းပြုရင် ကိုယ် ဘာ ဖြစ်မလဲ "
" မကောင်းမှုကို ခံရပါ့မယ် ဘုရား"
" ကိုရင်ကြီး ကိုယ်တွေ့ပဲ မဟုတ်လား။ ခု ကောင်းမှု ပြုလုပ်နေတော့ မကောင်းမှု ခံစားရဦးမလား "
" မခံစားရပါဘူး ဘုရား "
" အေးချမ်းပါတယ် ဘုရား "
"ခုလို ငါးပါးသီလကို ထိန်းသိမ်းနေတော့ အမှုအခင်းဖြစ်ဖို့ ရှိသေးသလား"
"မရှိတော့ပါဘူး ဘုရား "
" ခု ဆယ်ပါးသီလကို ထိန်းဖို့ ကြိုးစားနေပြီနော်၊ ဒါဆို ထောင်ထဲမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခမျိုး တွေ့ဦးမလား "
"မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး ဘုရား "
" ကိုရင်ကြီး နားလည်လွယ်မယ့် ဥပမာပြ တရားလေး ပေးမယ်။ သေသေချာချာ နှလုံးသွင်းပေတော့. . . သူဆင်းရဲတစ်ယောက်နဲ့ သူချမ်းသာတစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူဆင်းရဲက ဘယ်လောက်တောင် ဆင်းရဲသလဲ ဆိုရင် အလှူဒါနဆိုလို့ ဆန်တစ်ဆုပ်တောင်မှ မလှူနိုင်ရှာဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မြဲတယ်။ မပေါက်ကြားအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ သူချမ်းသာကတော့ အလှူဒါနကို ပေးလှူနိုင်သလို မတွန့်မဆုတ်လည်း ပေးလှူခဲ့တယ်။ အလှူရေစက် လက်နဲ့ မကွာ ပေးလှူခဲ့ပေမယ့် ငါးပါးသီလကို လက်အကျဲနဲ့ ရေခံသလို ကျိုးပေါက်ခဲ့တယ်။ သေလွန်တဲ့အခါကျတော့ သူတို့နှစ်ယောက် စလုံး နတ်ပြည်ရောက်ကြတယ်။ နတ်တိုပခံစားရတဲ့အဆင့်ကျတော့ သူဆင်းရဲက မြင့်ပြီး သူချမ်းသာက နိမ့်ကျသွားတယ်။ ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မြဲခဲ့တဲ့ သူဆင်းရဲက ဘုံဗိမာန်ရတဲ့ နတ်သားဖြစ်သွားတယ်။ အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခဲ့ပေမယ့် ငါးပါးသီလ မလုံခြုံတဲ့သူချမ်းသာက အလုပ်အကျွေးပြု နတ်သားပဲ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုအကြောင်း ရှိတယ် ကိုရင်ကြီး၊ ကျုပ်ဆိုလိုတာက ကိုရင်ကြီး သဘောပေါက်ရဲ့လား "
" ပေါက်ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ အရှင်ဘုရား ကျေးဇူးကြောင့် ဒီတစ်သက်မှာ တပည့်တော် လူဆိုး လူမိုက် မဖြစ်အောင် နေထိုင်နိုင်ပါတော့မယ် ဘုရား "
"အေး . . . အေး . . . သာဓု . . သာဓု . . သာဓု"
ကိုမိုး နာမည်ကြီး လူမိုက်ကြီး။
ဗိုလ်တထောင်ငမိုးမှာ ဆရာတော်၏အဆုံးအမဖြင့် တရားရိပ်တွင် ခိုလှုံ၍ အကုသိုလ်ဖြစ်စေမည့် အပြောအဆို အနေအထိုင် အကျင့်အကြံအားလုံးကို ရှောင်ကျဉ် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
သို့တစေ . . .
ငယ်စဉ်ကတည်းက သောက်စားမူးယစ်ပြီး အပျော်အပါးမျိုးစုံနှင့် နေချင်သလို နေခဲ့တာတွေ၊ ထောင်ထဲမှာ တစ်ကျွန်းမှာ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ ဆင်းဆင်းရဲရဲနေခဲ့ရသည့် ဒဏ်တွေက ဇရာလူသား ကိုမိုးကို ဖိဖိစီးစီးကြီး နှိပ်စက်နေပါပြီ။
ကိုရင်ကြီးဘ၀တွင်သော်မှ ကြာရှည်မနေနိုင်အောင် ကျမ်းမာရေးတွေ ဖောက်လာသည့် ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရသည်ကြောင့် လူဝတ်ပြန်လဲ လိုက်ရသည်။
ဆရာတော်က ကပ္ပိယတစ်ယောက် အကူအညီဖြင့် ကိုမိုးကို စောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးခဲ့သည်။ ဆေးဝါးများ ကုသပေးခဲ့သည်။
ကြာလာတော့ ကိုမိုးက သူ့ဒုက္ခ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးအား သူတစ်ပါးအပေါ် ကျရောက်မည့်အသိဖြင့် ဆရာတော်ကို လျှောက်ထားပြီး နှမဖြစ်သူနှင့်အတူ ပြန်လည် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။
နှမဖြစ်သူ ဒေါ်အေးမြကလည်း လုပ်လုပ်ကိုင်ကိုင်၊ ရရစားစားသမားမို့ သူ့ကို ထိထိရောက်ရောက် မပြုစုနိုင်ရှာ။ သူ့ခမျာ ဟုတ္တိပတ္တိဆေးဝါးကိုလည်း မမီဝဲရရှာ။ အာဟာရရှိသော အစားအသောက်ကိုလည်း မစားနိုင်ရှာ။
တပည့်တပန်းဆိုသူတွေကလည်း သူ့ကို ဖုတ်လေသည့်ငါးပိ ရှိလေသည်လို့မှ သဘောမမူကြတော့။
နှမဖြစ်သူကို လွှတ်၍ အကူအညီတောင်းကြည့်သော်လည်း တစ်ကျပ် တစ်ပြား ထောက်ပံ့ဖို့ကိုပင် ရှောင်ဖယ်ကုန်ကြသည်။
ဇရာ၏ အထောင်းအထုကို အလူးအလိမ့်ခံစားရင်း လာရာလမ်းကို ပြန်ရမည့်အချိန်ကို ဆင်းရဲပင်ပန်းကြီးစွာ စောင့်မျှော်နေရပါလေပြီ။
အရှိန်အ၀ါဆိုသည်မှာ ထာဝရ မဟုတ်။
ဖျာလေးတစ်ချပ်၊ အစွပ်မပါသော ခေါင်းအုံးအဟောင်းလေးတစ်လုံး၊ သေးအလူးလူး ချေးအလူးလူး နံစော်နေသည့် စောင်လေးတစ်ထည်ဖြင့် . . ။
အကျည်းတန်သော ဘ၀နိဂုံး၊ ဆုံးသတ်ခြင်းဖြင့် . . . ။
မကောင်းသော ပြုလုပ်မှုအကြောင်းမှ ပြန်လည် ထင်ဟပ်လာသည့်အကျိုးဆက်သည် ဘယ်သို့မှ ကောင်းသောအကျိုးဆက် မဖြစ်နိုင်ပေ။
ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တွင်ပင် တန်ပြန်ခံစားရတတ်သည်ကို သံဝေဂယူ၍ ကောင်းသောဘ၀ခရီးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနိုင်သည့် လူသားဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပါဟု ဆန္ဒပြုလျက် . . . .
credit;Kyaw Mya Than
နဂိုကတည်းက စာသင်ခန်းကျောခိုင်းကျင့် ရှိသူ မောင်မိုးမှာ မမြသစ်နှင့် ချစ်သူဘ၀ရောက်ပြီးနောက် စာသင်ခန်းကို လုံးဝနီးပါး ကျောခိုင်းနေလိ...ုက်သည်။
ဒါကိုသိသွားသည့် မမြသစ်က ကျောင်းမှန်မှန်မတက်ရင် သူနှင့် နောက်ထပ်မတွေ့တော့ဖို့ ရာဇသံပေးလာသည်။
သူတို့နှစ်ယောက်အကြားမှာ အရင်ကလို ပြေသွယ်ချောမွေ့နေသည်များ တန့်ရပ်သွားသည်။
မောင်မိုး ဆိုင်လာလျှင် မြသစ်က လက်ခံစကားမပြော။ ရှေ့ကဆိုင်ကိုကူးပြီး ရှေ့ကဆိုင်မှာ သွားထိုင်နေသည်။
တစ်ခါလည်းမဟုတ်၊ နှစ်ခါလည်းမဟုတ်၊ သွားတိုင်းပင် မမြသစ်ကစကားမပြော။ သူလာသည်ကို မြင်သည်နှင့် ရှေ့ဆိုင်ကို ကူးသွားသည်။
မောင်မိုးက နဂိုကတည်းက စိတ်မြန်သူဖြစ်သည့်အလျောက် သူ့ကို ဒီလိုလုပ်ရပါ့မလား လို့ သူများဆိုင်မရှေ့မှာ ရှူး ရှူးဒိုင်းဒိုင်း သွားလုပ်သည်။
အဲဒီနေ့က မပြောမလည်ဖြစ်ခဲ့သည့် ပြဿနာမှာ မြသစ်အဒေါ်ကတဆင့် မြသစ်အဖေနားသို့အထိ ပေါက်ရောက်သွားသည်။
နားမခံသာအောင် အဆူအပူခံရပြီးနောက် ဖခင်ဖြစ်သူက မြသစ်ဆိုင်မထွက်ရဟု တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်ထုတ်လိုက်သည်။
အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်ယူနေသူ ညီမ၀မ်းကွဲလှခင်ကို ဆိုင်ထွက်စေပြီး မြသစ်ကို လှခင်လုပ်ရမည့်ကစ္စကိုပြောင်းပြီး တာဝန်ယူခိုင်းလိုက်သည်။
မြသစ်မှာ ဆိုင်မထွက်ရရုံမက အပြင်သို့လည်း မထွက်ရတော့ . . .။
ဖခင်ဖြစ်သူကို အလွန်ရိုသေကြောက်ရွံ့ရသည့်အတိုင်း မောင်မိုးနှင့် အဆက်အသွယ် ပြန်လုပ်ဖို့ကို လုံးဝ စိတ်မကူးရဲ။
မောင်မိုးက နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုးစားကြည့်ပေမယ့် ဘယ်လိုမှ အရာမထင် အကြောင်းမထူး ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြသစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း မောင်မိုးကို ယတိမပြတ်သေးသော်လည်း စိတ်ကုန်သလို ဖြစ်နေသမို့ မြသစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြန်လည်ဆက်သွယ်ဖို့ မကြိုးစားတော့။ အသည်းနှလုံးကျွဲခတ်သည့်နှယ် ခံစားနေရသူမှာ မောင်မိုး။
မောင်မိုးက မြသစ် မှ မြသစ်။ သူငယ်ချင်း အလိန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှသော နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ကြိုးစားကြည့်သည်။
စိတ်မထိန်းနိုင်သူ မောင်မိုးက ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချလိုက်သည်။
သူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်က သူ့ဘ၀ကို ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်သွားကြမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှား။
သူငယ်ချင်း အလိန်က တားသေးသည်။
မရ. . . ။
တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း လုပ်တတ်သည့် စရိုက်အခြေခံရှိသူ မောင်မိုးက စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပိုင်းတွင် အားနည်းသည်။
သူပြုလုပ်သည့်အကြောင်းကနေ တန်ပြန်လာမည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အလေးထား စဉ်းစားတတ်သူမဟုတ်။
သူက တုံးဆိုတိုက်၊ ကျားဆို ကိုက်သမား။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်နှင့် ဗိုလ်တထောင်ငမိုးတို့ မတူညီသည့်ကွာခြားချက်မှာလည်း ဒါပဲ ဖြစ်၏။ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်က ခေါင်းသမား။ မကောင်းမှုပြုပေမယ့် အတွေးအခေါ်ရှိသည်။ စဉ်းစားချင့်ချိန် ပိုင်းခြားဝေခွဲမှုရှိသည်။ သူများဟာကို ကျူးကျော်တော့မည်ဆိုလျှင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံအောင် ထိန်းသည့် ပြင်ဆင်မှု လုပ်တတ်သည်။ ဗိုလ်တထောင်ငမိုးက ရှူးရှူးဒိုင်းဒိုင်းသမား။ လုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် ဘာကိုမှ မစဉ်းစား။
အုပ်တံတိုင်းမှန်းသိလျက် ခေါင်းနှင့် တိုက်ရမည်ကို နောက်မတွန့်တတ်သူ။ ဒါကြောင့်လည်း လူမိုက် သက်ဆိုးမရှည်။
ခုကိစ္စတွင် အခွင့်အရေးပေါ်လာမည့် အချိန်ကို စောင့်သင့်ပါလျက် မစောင့်။ သူလုပ်ချင်တာကို ဇွတ်လုပ်လိုက်သည်။
အုပ်တံတိုင်းကို ခေါင်းနှင့်ပြေးဆောင့်လိုက်သည့် အဖြစ်။
ကျည်ဆန်လာမည့် လမ်းကြောင်းကို ရင်ဘတ်နှင့် ထိုးခံလိုက်သည့် အဖြစ်။
တစ်နေ့ . . .။
ရထားလုံးတစ်စီးငှားပြီး မြသစ်ကို အိမ်ပေါ်မှာ အတင်းတက်ဆွဲသည်။ မြသစ်ဦးလေး ဦးတင်မောင်က ၀င်ရောက် ထားဆီးခဲ့ရာ မောင်မိုးက အသင့်ဆောင်လာသည့် ဓားမြှောင်ဖြင့် ထိုးထည့်လိုက်သည်။
ဦးတင်မောင် ပုံလျက်သား လဲကျသွားသည်။
မြသစ်လည်း ဓားသွားအဖျား ခတ်ခံလိုက်ရသည်။
အိမ်တွင်းရှိနေသူများ ကြောက်လန့်တကြား အောင်ဟစ်သံများကြောင့် အိမ်နီးပါးချင်းများ ၀ိုင်းလာကြသည်။
မောင်မိုးက မဆိုင်သူမကပ်နှင့်ဟု ဓားတ၀င့်ဝင့်ကြိမ်းမောင်းပြီး ထွက်ခဲ့သည်။ မည်သူမျှ အနားမကပ်ရဲကြ။
ပုလိပ်တွေက မောင်မိုးတို့ အိမ်လာဝိုင်းသော်လည်း မောင်မိုးကို မမိ။
မောင်မိုးကလည်း အဖမ်းမခံ။ တိမ်းရှောင် ပုန်းအောင်နေခဲ့သည်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အလိန်ကလည်း အစစအရာရာ အကူအညီပေးခဲ့သည်။ မောင်မိုးကျူးလွန်လိုက်သည့်အဖြစ်မှာ သေးသေးကွေးကွေးအမှု မဟုတ်။ အဲ့သည့်ခေတ်အချိန်ကာလ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ အမှုကြီး စာရင်းဝင်သည်။ ဓားထိုးမှု၊ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု၊ အလိုမတူသော မိန်းကလေးတစ်ဦးကို အဓမ္မ လက်ရောက်ဆွဲမှု။
၃၂၆ ၊ ၃၇၆၊ ၄၅၂။ နောက်ထပ်တိုးလာသည်က ၀ရမ်းပြေးမှု။
ဗိုလ်တထောင်ပုလိပ်ဌာနတစ်ခုလုံး ယောက်ယက်ခတ်ကုန်သည်။ အလုပ်ရှုပ်ကုန်သည်။ မောင်မိုးတိမ်းရှောင်နေသည်မှာ လေးလရှိပြီ။
သူနှင့်ပတ်သက်သည့် ကောလဟလသတင်းများကလည်း ဟုတ်တာ တွေရော၊ မဟုတ်တာတွေပါ ရောပြွမ်းထွက်လာသည်။
တုတ်၊ ဓားပြီးသည်။ ကျည်လွဲသည်။ ကိုယ်ပျောက်သည် . . . စသည့် ကောလဟလ သတင်းများဖြင့် မောင်မိုးအမည်ကို ထင်ပေါ်လာစေခဲ့သည်။
နောင်ဗိုလ်တထောင်ငမိုးဟူ၍ နာမည်ကြီး လူမိုက်ဖြစ်လာစေရန် ဤသို့မှ အစပျိုးခဲ့သည်။
ဗိုလ်တထောင်ငမိုး အမည်ဖြင့် လူမိုက်လောကတွင် နာမည်ကြီးလာသော်လည်း ဗိုလ်တထောင်ငမိုး၏ ရပ်ကွက်နေ လူထုအပေါ် စော်ကား မော်ကား မလုပ်ဘဲ ရပ်ကွက်ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့သောကြောင့် လူချစ် လူခင် များခဲ့သည်။
ဒါပေသိ မြန်မာ့အလင်းအယ်ဒီတာ ဆရာသင် အား သတ်သည့်လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်လိုက်သောအခါတွင်မူ လူထု၏ အော့နှလုံးနာ ရွံမုန်းကြီးကို ခံလိုက်ရသည်။ တကယ်တော့ ကိုမိုးက ဆရာသင် ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သည်ကို သူမသိ။
သူက ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစားထားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ခိုင်းစေချက်ကြောင့် ထိုပြစ်မှုကြီးကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏
သူ၏ တွေးခေါ်မြှော်မြင်မှုအားနည်းချက်ကြောင့် ထိုပြစ်မှုကြီးကို တဇောက်ကန်း ကျူးလွန်ခဲ့ရာ တစ်သက်တစ်ကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ဖြင့် တစ်ကျွန်းသို့ ရောက်သွားခဲ့သည်။
တရားခံတစ်ယောက်ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှန်ပြီးမှ တရားရုံးတွင် အမှုကို တစ်ဖန်ပြန်လည်စစ်ဆေးရသည့် မှုခင်းဟူ၍ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က ဗိုလ်တထောင်ငမိုး၏အမှုတစ်ခုသာ ရှိခဲ့ကြောင်း မှုခင်းရာဇ၀င်တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
ဆရာသင်သတ်မှုတွင် အသွားစေခိုင်းသူက ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ အစွယ်ဖြတ်သွားသူက ပြစ်ဒဏ်ထိခံခဲ့ရသည်။
တရားသည် မတရားသို့နှယ် ဖြစ်ရှိသွား၏။
တရားချိန်ခွင်လျှာသည် အလှည့်အပြောင်း လမ်းကြောင်းက အဓိကတရားခံဖြစ်သည့် အသွားစေခိုင်းသူကို တရားခွင်သို့ ပြန်တင်ခဲ့သောကြောင့် အစွယ်ဖြတ်သူမုဆိုးမှာ ကျွန်းဒဏ်မှ လွတ်မြောက်သွားသည်။
လူမိုက်ဘွဲ့ခံထားသည့် ဗိုလ်တထောင်ငမိုးနှင့် လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်တို့ နှစ်ယောက်မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီကာလက ရန်ကုန်မြို့တွင် လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားခဲ့ကြသူ နှစ်ယောက်ဖြစ်၏။
နှစ်ယောက်စလုံး လက်ဖျားငွေသီး ခဲ့ကြသည်။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်က ဗိုလ်တထောင်ငမိုးထက်ပို၍ ၀င်ငွေလမ်းဖြောင့်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်ကာလက လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်၏ တစ်လ၀င်ငွေ ဘယ်လောက်ရှိသည်ကို လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်မှတစ်ပါး မည်သူမှ အတိအကျ မပြောနိုင်။
သို့တစေ အနီးကပ်ဆုံး ခန့်မှန်းသည်မှ ထွက်လာသည့် အဖြေမှာ . .
တစ်လသုံးထောင်ထက် နည်းလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု တွက်ချက်ခန့်မှန်းကြသည်။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်၏အပိုင်းမှာ လောင်းကစားဝိုင်းကြီးတွေ နေ့စဉ်လုပ်သည့် ဟိုတယ်များ၊ ဘိန်းခန်းအသေးအကြီးပေါင်းစုံနှင့် ကုန်စို ကုန်ခြောက် အကြီးအကျယ် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သည့် ပွဲရုံကြီးများ၊ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး အရက်နှင့် အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းကို ချုပ်ကိုင်ထားသည့် လိုင်စင်စီကြီးများ၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ သံဈေးလို အရောင်းအဝေယ် ဖွံ့ဖြိုးသည့်လုပ်ငန်းများ ရှိကြသည်။
အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကရသည့် ဆက်ကြေးဝင်ငွေအပြင် ကြည့်မြင်တိုင် - စက်ဆန်းပြေးဆွဲနေသည့် ဘတ်(စ်)ကားများ၊ ဟိုတယ်နှင့် ကစားဝိုင်းများတွင် ဂိတ်ထိုးသည့် တက်(ခ်)စီ စတန်းများ ထံ၌လည်း နေ့စဉ် ဆက်ကြေးဝင်ငွေရသည်။
အခြား အမည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးက လစဉ်ရသည့် ဆက်ကြေးဝင်ငွေများလည်း ရှိသည်။
တစ်လ သုံးထောင်လောက်ရသည့် ၀င်ငွေမှာ ဖြစ်နိုင်လောက်သည်ဟု တွက်ချက်မှု ကိန်းဂဏန်းထွက်ခဲ့သည်။
ရွှေဒင်္ဂါးတစ်ပြား တစ်ဆယ့်ခြောက်ကျပ်၊ တစ်ဆယ့်ရှစ်ကျပ် ခေတ်လောက်က ဖိုးတုတ်၏ ၀င်ငွေ သုံးထောင်ခန့်ရှိသည်ဟု ဆိုကြရာ အတော်များသည့် ငွေကြေးဟု ဆိုနိုင်၏။
သို့တစေ ထိုမျှသောငွေကြေးများကို သူတစ်ယောက်တည်းက သပိတ်ဝင် အိတ်ဝင် ရသည်တော့မဟုတ်။
သူက ခေါင်းကိုင်အဖေ ဂေါ့ဖားသားဆိုတော့ တပည့်တပန်းများ၏ စားဝတ်နေရေးကို သူကလုံးဝတာဝန်ယူထားရသည်။
သူက ဆက်ကြေးရသလို သူက ပြန်ပေးရသည့် ဆက်ကြေးအမျိုးမျိုးလည်းရှိပြန်သည်။
အဲ့ဒီ သူက ပြန်ပေးရသည့် ဆက်ကြေးငွေပမာဏမှာ ရာဂဏန်းမဟုတ်၊ ထောင်ဂဏန်းအထိ စာရင်းပေါက်သည်။
ရာဇ၀တ်မှုများလိုက်ရာတွင် နာမည်ကြီးသည့်ရှေ့နေ့ကြီး ပန်ကာ ဦးအေးကို အမှုလိုက်ခအပြင် ဥပဒေရေးရာကိစ္စ အကြံပေးရသည့်အတွက် လစဉ် ပုံမှန်ဝင်ငွေလည်း ပေးထားရသည်။ မနည်းပါ။
တကယ်တော့ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် က ဆင်သတ်ရသည့် နာမည်ကို ခံရတာပဲရှိသည်။
ဆင်တကောင်လုံးကို သူကမရ။ ဆင်သတ်ပြီး အရပ်ဝေနေရသူ။
အဲ့ဒီလို ရက်ရက်ရောရောဝေနိုင်လို့လည်း ဥပဒေအပြင်က လူဖြစ်နေပါလျက် ဥပဒေ၏ အဆုံးအမကို မခံရဘဲ ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေခြင်းဖြစ်၏။
အမှုလိုက်ရဲအင်စပတ်တော် ဦးဟုတ်ဂွမ် သတ်မှုနှင့် ထောင်ထဲ ခဏ၀င်ရသည့်ကလွဲလို့ အုပ်ရိုးအတွင်း လူအဖြစ် အနေမကြာခဲ့ရ။
ရှေ့နေကြီးတစ်ယောက်ကိုပင် သူ့အတွက် အကြံပေးအဖြစ် လစာပေး၍ လက်တွဲထားခဲ့သည်။ ဗိုလ်တထောင်ငမိုးက ခေါင်းသမားမဟုတ်။
ရှူးရှူးဒိုင်းဒိုင်း စိတ်ထင်သလို တုံးဆိုတိုက်၊ ကျားဆိုကိုက် ခဲ့သည်ကြောင့် အုတ်ရိုးအပြင်မှာထက် အုတ်ရိုးအတွင်းမှာ အနေများခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံး တစ်ကျွန်းသို့ပင် သွားခဲ့ရသည်။
အဲ့ဒီလောက်ဆို သူတို့နှစ်ယောက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ ထင်ပေါ်သူဖြစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက် ပြည့်စုံလောက်ပါပြီ။
သူတို့နှစ်ယောက်၏ ဘ၀နိဂုံးဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြရပါမည်။ သို့မှသာ မကောင်းသော ပြုလုပ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့် ယှဉ်တွဲခဲ့ဖူးသူများ၏ ဘ၀နိဂုံးအဆုံးသတ် ဘယ်သို့ ရှိသည့်ပုံရိပ်ပေါ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ မကောင်းမှုပြုခြင်း၏ တုံ့ပြန်မှု အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ တမလွန်အထိမစောင့်ဆိုင်း။ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ကြီးမှာပင် မကောင်းသော တုံ့ပြန်အကျိုးကို ပေးတတ်၏။ အရာရာတွင် တုံ့ပြန်မှုဟူသည် ရှိစမြဲ။
ကောင်းသောလမ်းကို လျှောက်လျှင် ကောင်းသောလမ်းဆုံးသို့ ရောက်မည်။ မကောင်းသောလမ်းကို လျှောက်လျှင် မကောင်းသောလမ်းဆုံးသို့ ရောက်မည်။ ဤသည်မှာ နိယာမစစ်မှန်သော သဘာဝတရားပင်။
ကျွန်းပြန်ကြီး ဦးမိုးမှာ ထောင်က လွတ်လာပြီးနောက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပြောင်းလဲ သွားသည်။
ကျွန်းပြန်ကြီးဟူသော နာမည်တစ်လုံးထပ်တိုးပြီး တပည့်တပန်းတွေက သူ့ကို ယခင်ပုံစံအတိုင်း ဆက်ဆံကြသည်။ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသူတွေကလည်း ယခင်အတိုင်း အပေးအကမ်း ရှိလာသည်။ သို့တစေ ဦးမိုးက တပည့်တပန်းတွေ ချဉ်းကပ်လာသည်ကိုလည်း ခေါင်းခါလိုက်သည်။
အပေးအကမ်းရှိလာသည်များကိုလည်း လုံးဝ ငြင်းပယ်လိုက်သည်။
အသက်အရွယ်ထောက်လာပြီကတစ်ကြောင်း၊ လာလမ်းဆိုပေမယ့် ပြန်လမ်းကောင်းရန် ကြိုးစားရတော့မည်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် အသိတရားရလာသည်က တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် အတိတ်ကို ပြည်ဖုံးကားချ၍ အနာဂတ်လမ်းကြောင်း အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်ရန် ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
နှမဖြစ်သူ ဒေါ်အေးမြထံတွင် မှီခိုနေထိုင်ပြီး ပူလောင်သော စည်းဝိုင်းကနေ အေးသက်သော စည်းဝိုင်းထဲသို့ ၀င်ရန် ကြိုးစားလိုက်သည်။
ပိတ်ဖြူအင်္ကျီ၊ ပိတ်ဖြူလုံချည် ၀တ်လျက် စိပ်ပုတီးကို လက်ကမချဘဲ သိမ်ကုန်းကျောင်းတိုက်၊ တိုက်အုပ်ဆရာတော် သီတင်းသုံးရာ ရန်ကုန်ကျောင်းတိုက်တွင် အနေများလာသည်။
ဆရာတော်၏ ဝေယျာဝစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရင်း ဆရာတော်၏ အဆုံးအမ၌ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာသည်။
မကောင်းတာမှန်သမျှကို စွန့်၍ ကောင်းတာမှန်သမျှကို လုပ်ကိုင်နေထိုင်ခဲ့ရာမှ ကိုရင်ကြီး စည်းပါရစေဟု ဆရာတော်ထံ ခွင့်ပန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။
ဆရာတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကိုရင်ကြီးအဖြစ် ဆရာတော်၏ခြေတော်ရင်းမှာပင် ဆရာတော်၏အဆုံးအမတွင်တည်၍ နေထိုင်ခဲ့သည်။
Posted by linnzawhtike at 4/05/20130comments
အဲဒီတုန်းက တပည့်တပန်းအားကိုးနှင့် လုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တစ်ကိုယ်တော် ကြဲခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
... ထိုစဉ်က လမ်းမတော်အပိုင်မှာ နာမည်ကြီးနေသည့် မြန်မာလူမိုက်ကြီးတစ်ယောက်ရှိသည်။
ပုဏ္ဏားဘကွန်း။ ပုဏ္ဏားဘကွန်းက ကိုယ်တိုင်လည်း ဇ ရှိသည်။ တပည့်တပန်းအင်အားလည်း ကောင်းသည်။ အဲ့ဒီအချိန် ကိုဖိုးတုတ်မှာလည်း တပည့်တပန်း အသင့်အတင့်ရှိနေပြီ။ ပုဏ္ဏားဘကွန်းလောက်တော့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမကောင်းသေး။ ပုဏ္ဏားဘကွန်းမှာ မတ်စတီးခန်းနှင့် လက်ဝါးချင်း ရိုက်ထားသူ။ ဒါကြောင့် ကိုဖိုးတုတ်က ပုဏ္ဏားဘကွန်းကို ရှင်းပစ်မှဖြစ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ကိုဖိုးတုတ်က ပုဏ္ဏားဘကွန်းနေသည့် ဆယ့်တစ်လမ်းထဲသို့ တစ်ယောက်တည်းဝင်သွားပြီး ပုဏ္ဏားဘကွန်းအိမ်ရှေ့တည့်တည့်မှာ ရပ်လိုက်သည်။
တကယ်တော့ ပုဏ္ဏားဘကွန်းကလည်း သွေးနီသူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေသိ ရုတ်တရက်မမျှော်လင့်သောဖြစ်ရပ်ကြောင့် ရုတ်တရက်ဘာလုပ်ရမည် မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘဲ ကြောင်သွားခြင်းဖြစ်၏။
သုံးကြိမ်တိတိခေါ်လို့ ဆင်းမလာသည့်အဆုံး . . .
ထိုဖြစ်စဉ်သတင်းမှာ လမ်းမတော်နယ်မြေတွင် ချက်ချင်းပျံ့ကားသွားသည်။ တဆင့်စကားက နိယာမထုံးစံအတိုင်း ဖြစ်စဉ်ထက်ပို၍ ကျယ်ကားသွားသည်။ အဲ့ဒီကစပြီး လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဆိုသည့် လာမည်တစ်လုံး ဟိန်းထွက်လာခဲ့သည်။ လူမိုက်သွေးကြွ၊ ဇ ရှိသူတွေ သူ့ထံ ဗိုလ်ဝင်ခံလာကြသည်။ အဲ့ဒီအချိန်က လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်နှင့် မရှေးမနှောင်းခေတ်ပြိုင် နာမည်ထွက်လာသူမှာ ဗိုလ်တထောင် ငမိုး။ ဗိုလ်တထောင်ငမိုးကလည်း ခေသူမဟုတ်။ မိုက်သွေးကြွသည့် နေရာတွင် ဇကြီးသူဖြစ်၏။
လမ်းမတော်ဖိုးတုန်ခေတ်ထလာသည့်အခါ မတ်စတီးခန်း မှေးမှိန်သွားသလို၊ ဗိုလ်တထောင်ငမိုး ခေတ်ထလာသည်တွင် မန်မဆာနာမည်ပျောက်သွားသည်။ မတ်စတီးခန်း၊ မန်မဆာ ဟူသည့် ကုလားလူမိုက်ကြီး နှစ်ယောက် နာမည်ကျော်ထွက်လာသည်။ နယ်မြေခြင်းက တခြားစီမို့ ဂူတစ်ဂူထဲ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် အောင်းသည့် ပြဿနာမပေါ်။ သူ့နယ်နှင့်သူ တစ်ဗိုလ်တစ်မင်း လွှမ်းမိုးကြီးစိုးခဲ့ကြသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် နာမည်ကြီးတာ တူညီပေမယ့် စရိုက်လက္ခဏာချင်းတော့ မတူ။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်က ကုလားလူမိုက်များ၏ ကြီးစိုးမှုကို မခံချင်သောကြောင့် လူမိုက်လောကထဲသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သူ။
ဗိုလ်တစ်ထောင်ငမိုးက ငယ်စဉ်ဘ၀ အခြေအနေယိုင်နဲ့ခဲ့ရာမှ ထင်ရာစွတ်လုပ်တတ်သော သူ၏ပင်ကိုပါ ညာဉ်ဆိုးကြောင့် လူမိုက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသူ။
မောင်မိုးဆိုသောအမည်မှာ နေ့သင့်နံသင့် မှည့်ခေါ်သည့် "စုဠိ" အမည်မဟုတ်။
ရွှေပွဲလာ ပရိသတ်တို့အလွန်စွဲမက် ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဇာတ်ထုပ်။
နေ့စေ့ လစေ့ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီး လွယ်ထားရသူ မဗုံဗုံမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် အိမ်နီးချင်း မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများ တားမြစ်သည့်ကြားထဲက ၀ါသနာကို မတားနဲ့တော့ရှင်၊ မဗုံဗုံမှာ ပွဲခင်းထဲသို့ ရောက်နေခဲ့သည်။
ဗိုက်ထဲက တစစ်စစ်နာလာပေမယ့် မဗုံဗုံက အိမ်ပြန်ဖို့ လုံးဝစိတ်မကူး။
ငမိုးရိပ်မိကျောင်းက လူယောင်ဖန်ဆင်းလျက် ရေခင်းသူမယ်ပွင့်နှင့် တွေ့ပြီး ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာ နှလုံးသားစကားထာ ဖွဲ့နေချိန်အရောက် မဗုံဗုံဗိုက်ထဲက ကျွမ်းသူပုန်ထလာသည်။
မဗုံဗုံက ဇွဲတင်းကြည့်သေးပေမယ့် ပွဲခင်းထဲမှာ ဆက်နေလို့ မရတော့။
"မောင်ကြီးရဲ့ နှမလေးတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မမြင်ရ မတွေ့ရရင် မနေနိုင်အောင် ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြပေမယ့် မောင်ကြီးရဲ့ မျိုးရိုးဇစ်မြစ်ကို နှမလေးမသိသေးသမို့ နှမလေး သိပါရစေလားရှင် "
လူမိုက်ဟု အများက အသိအမှတ်ပြုလာသောအခါ ကိုတို့ ဦးတို့ ထပ်ကမတပ်ဘဲ စရိုက်နှင့် ညီထွေစွာ ဗိုလ်တထောင် ငမိုးဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။
လူချောကြီးဟု မဆိုသပေမယ့် နှစ်လိုဖွယ်ရာ အဆင်းအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံ၍ လူရည်သန့်သည်။ သတ္တိကောင်းသည်။ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည်။
လူငယ်ဘာဝ ချစ်သူအတွက် မခံချင်စိတ်ဖြင့် တဇွတ်ထိုး၊ တဇောက်ကန်း၊ လုပ်မိခဲ့ရာမှ လူမိုက်ဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီး မကောင်းသော ဘ၀လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ခဲ့ရ၊ လျှောက်ခဲ့ရသူဖြစ်၏။
ကိုမိုးကို တန်းတန်းစွဲခင်မင်သည့် စိတ်တူကိုယ်တူ ရင်ဘတ်ပေးပေါင်းသည့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသည်။
ဘဦး ခေါ် အလိန်။ အလိန်က သူဌေးသား။ မိဘတွေက ချမ်းသာသည်။ နိုင်ငံခြားပို့ ဆေးပြင်းလိပ်လုပ်ငန်းဖြင့် ကြီးပွားချမ်းသာခဲ့ကြသည်။
အလိန်က သွေးချင်းလေးယောက်တည်းမှာ တစ်ဦးတည်းသော ယောင်္ကျားလေး၊ သူ့ကိုမွေးပြီး စီးပွားပိုတတ်လာသောကြောင့် အရမ်းအလိုလိုက်ထားသည်။ ရွှေလက်ပတ်ကြိုး၊ စိန်လက်စွပ်၊ ရွှေကြိုးကိုပင် အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ဆင်ပေးထားသည်။ မုန့်ဖိုးဆိုလည်း လက်ဝါးဖြန့်တိုင်း ရနေသည်။
အဖေကတလှည့်၊ အစ်မနှစ်ယောက်က တစ်လှည့်ဖြင့် အလျှံပယ် ရနေသည်။ ရှေးရေစက်ကြောင့်လားမသိ။ အလိန်က မောင်မိုးကို အရမ်းခင်သည်။ တန်းတူ ရည်တူ ပေါင်းသည်။ အ၀တ်အစားကအစ မောင်မိုးကို ၀ယ်ခြမ်းပေးသည်။ မောင်မိုး လူမိုက်မဖြစ်ခင်ကတည်းကပင် သူတို့နှစ်ယောက် ပေါင်းသင်းမှု မှာ ခိုင်ကြည်ခဲ့သည်။
မမြသစ်ကလေးက အချောအလှကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ဖြူဝင်းသော အသား၊ အပြုံးလှသော သွားတတ်ကလေးနှင့် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် အလှရိပ်ထင်သည်။
လူချောတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် မိန်းကလေးတို့ စိတ်ဝင်စားသည့် ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ ပြည့်စုံသည်။
အလိန်ကလည်း မောင်မိုးကို တင့်တယ်လျောက်ပတ်သော အဆင့်ထက်သာလွန်သည့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရုံမက ရိုးကုန်တိုက်မှာရောင်းသည့် ဆယ့်လေးကျပ်တန် အယ်လ်ဂျင် ရွှေရောင် နာရီကလေးတစ်လုံးကိုပါ ၀ယ်ပေးခဲ့သည်။
တောင်းမှာ အကွပ်၊ လူမှာ အ၀တ် ဆိုစကားအတိုင်း မောင်မိုးကလည်း လူလတ်တန်းစား သားသမီးများ ၀တ်ဆင်မှုအဆင့်ကို မီအောင် ၀တ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။
မောင်မိုးက အခွင့်အရေးရတိုင်း မမြသစ်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုကို မျက်လုံးအထာနှာင့်တစ်မျိုး၊ နှလုံးသားပုံရိပ်အမူအရာနှင့် တစ်သွယ်၊ စကားပြော အပြုံးအမျိုးမျိုးဖြင့် တစ်ဖုံ ချစ်နေမိကြောင်း သိပါစေကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
သူမဘက်ကလည်း လိုက်လျော အထာသဘောကို အပျိုဖျန်းကလေးတို့၏အတတ်ပညာဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့်တက်၍ ချစ်သ၀ဏ်လွှာပါးသည်။ ဟင့်အင်း အမူအယာ ပြပေမယ့် ဆန်တောင်းထဲက စာခေါက်ကလေးကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် လက်ကစား၍ ယူလိုက်သည်။
သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှုအပြည့်အ၀ရှိသွားကြသည့်နောက် မောင်မိုးဆိုင်ရှေ့မှာ ရပ်ခွင့်ရသွားသည်။ နေ့ခင်း ဈေးရောင်းပါးချိန်တွင် မမြသစ်အဒေါ်က အိမ်ခဏပြန်တတ်သည်။ နေ့စဉ်တော့ မဟုတ်။
ချစ်တတ်သူတို့ အပေးအယူမျှကြပြီဆိုတော့လည်း ကြည်နူးရွှင်မြူးစရာတွေ အပြည့်အသိပ်ပေါ့။ တစ်ခါတရံတော့လည်း စိတ်သဘောမတွေ့စရာ မကြည်သာစရာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာကလေးတော့ ကြားဝင်လာတတ်သည်။
မောင်မိုး ကျောင်းမှန်မှန် မတတ်သည့် ကိစ္စအတွက် မကျေမနပ်ပြောလာသည်။ ဆိုင်ကို မလာဖို့ တားမြစ်စကားပြောလာသည။် သူပြောသည်ကို နားမထောင်ဘဲ တစ်ဘက်လှည့်ပြီး စိတ်ကောက်နေတတ်သည်။
Posted by linnzawhtike at 4/02/20130comments
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီက ရန်ကုန်မြို့နေသူ အများ၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားအပြောများခဲ့သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရှိခဲ့သည်
။ သူသည် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုသည့်လုပ်ရပ်များလုပ်ခဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်စေကာမူ ခေတ်ကာလအလျောက် ထူးခြားသော သူ၏လုပ်ရပ်ဖြစ်စဉ်များကြောင့် သူ၏အမည်နာမမှာ ဟိန်းထွက် ကျော်ဇောလို့ လာသည်။ သူ၏လုပ်ရပ်ဖြစ်စဉ်များမှာ ကောင်းရိပ်ဘက်သို့ အလေးမသာသည့်အလျောက် မကောင်းသတင်းဆိုးများနှင့် ယစ်ထွေးခဲ့သည်။ နာမည်ကြီးသောလည်း နာမည်မကောင်း။ ကောင်းသောနှင့် ကျော်ကြားထင်ရှားခြင်းသည် နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း မကောင်းရိပ်ထင်သော ကျော်ကြားခြင်းသည် နှစ်လိုဖွယ်မဟုတ်ပေ။ ကောင်းသတင်းနှင့်ကျော်ဇောထင်ရှားသူမှာ အသတ်သေသော်လည်း အမည်မသေ။ မကောင်းသတင်းနှင့် ကျော်ဇောထင်ရှားသူမှာ သူမသေခင်ကတည်းက နာမည်သေသည်။ ကောင်းသောပုံရိပ်ထင်သူများ၏ ဘ၀နိဂုံးသည် အနားသတ် မကောင်း။ အကျည်းတန်သည်။ သို့စေကာမူ .. ခေတ်ရေစီကြောင်း အခြေအနေအရသူ့ကို အလေးထားနေရာပေး၍ ဆက်ဆံရသည်။ ကွယ်ရာမှာ ဘာတွေပဲပြောပြော ဘယ်သို့ပင် နှာခေါင်းရှုံ့ ရှုံ့၊ ဘယ်လိုပင် မဲ့ရိပ်ပြေး ရှေ့တင်ဆိုတော့ သူ့အကြောင်း မကောင်းသတင်း ဆိုဝံ့သူမရှိ။ နှာခေါင်းရှုံ့ရဲသူမရှိ။ မဲ့ရိပ် ထင်ရာသူမရှိ။ နှစ်လိုဖွယ် အရိုးရိပ်တင်ပြလျက် ကြည်ကြည်သာသာ အမူအရာဆောင်ပြီး လိုလိုလားလားဟန်ထင်၍ ဆက်ဆံကြရသည်။ သူ့အရှိန်အ၀ါက သည်လောက်ပင်ကြီးထယ်သည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအခြေအနေအရ စီးပွားရေးအချက်အချာကျသည့်နယ်မြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာ သူ၏စိုးမိုးမှု သြဇာသက်ရောက်မှအောက်မှာ ရှိခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်ကို တရားဝင်အုပ်ချုပ်နေသည့် ပုလိပ်အဖွဲ့ကြီးရှိသော်လည်း ပုလိပ်အဖွဲ့ကြီး၏ သြဇာသက်ရောက်မှုမှာ သူ၏ သြဇာသက်ရောက်မှုလောက် မထိရောက်ခဲ့။ ပုလိပ်အဖွဲ့ကြီးက ဥပဒေနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်သည်။ သူက ဥပဒေကို မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လုပ်ပြီး အုပ်ချုပ်သည်။ အဲဒီခေတ်က ရန်ကုန်မြို့ကို သုံးပိုင်းခွဲ၍ ဒီ-၀ိုင်-အက်(စ်) ခေါ် မျက်နှာဖြူ ရဲဝန်ထောက်သုံးယောက်က အုပ်ချုပ်သည်။ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်း။ ရန်ကုန်အလယ်ပိုင်းကို ပုလိပ်အဖွဲ့က အုပ်ချုပ်ထားသည်။ သူက စိုးမိုးကိုင်တွယ်ထားသည်။ နယ်စားပယ်စားလုပ်နေသည်။ လူမိုက်ဘွဲ့ခံ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်။ အင်္ဂလိပ်များအုပ်စိုးသည့် ကာလတွင် လူမိုက်ခေတ်တစ်ခေတ် ထွန်းကားခဲ့သည်။ လူမိုက်ခေတ် ထွန်းကားလာအောင် သူတို့ကပင် လုပ်ပေးခဲ့သည်။ လူမိုက်ကို ကြားခံအဖြစ်ထား၍ လူလူချင်း ဗိုလ်ကျစိုးမိုးသည့် စနစ်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ငါးကြင်းဆီနှင့် ငါးကြင်းကြော်သည့်နည်း။ ဒါ့ကြောင့်လည်း လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်မှာ ငွေရွှင်သော နယ်မြေကို တရားဝင် အပိုင်စားရထားသူတို့နှယ် စိုးမိုးချယ်လှယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်စိုးစဉ်ကာလတလျှောက်လုံး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သည်အထိ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်၏ ကျော်ဇောသတင်းမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်က တပည့်အသိုင်းအ၀ိုင်း အားကိုးနှင့် မိုက်သူ မဟုတ်။ သူကိုယ်တိုင်လည် လုပ်ရဲ ကိုင်ရဲ သတ္တိရှိသည်။ တပည့်တပန်းအသိုင်းအ၀ိုင်းကောင်းကိုလည်း ရွေးတတ် မွေးတတ်သည်။ သြဇာညောင်းအောင်လည်း အကိုင်အတွယ် ကျင်လည်သည်။ မလှုပ်ရဲ၊ မလှန်ရဲအောင်လည်း နည်းမျိုးစုံသုံး၍ ထိန်းထားနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ ဒါတင်မက ပြေလည်အောင် ဆက်ဆံရမည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အထာကျွမ်းသည်။ အချိုကြိုက်သူ အချို၊ အချဉ် ကြိုက်သူ အချဉ်။ ချဉ်ငန်စပ်ကြိုက်သူကို ချဉ်ငန်စပ်။ ဘာကြိုက် သူဖြစ်သည်ကို အကဲဖမ်းကျွမ်းသလို အကြိုက်ကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ငွေရေး ကြေးရေး အပေးအကမ်းလည်း ရက်ရောသည်။ အဲဒီအရည်အချင်းတွေကြောင့်လည်း လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်မှာ လူမိုက်သတ်တမ်းရှည်ကြာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ လူမိုက်ခေတ်အစ၊ မတ်စတီးခန်းမန်မဆာတို့က ဟု ဆိုစမှတ်ပြုရအောင် ရန်ကုန်မြို့၏ လူမိုက်စိုးမိုးရေးကို သူတို့က စတင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာလူမိုက်ခေတ်မရောက်မီက ကုလားလူမိုက်ခေတ်။ ထိုစဉ်ကာလက ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် မြန်မာလူမျိုးများ အနေနည်းသည်။ ကုလားနှင့်တရုတ်များသာ အနေများသည်။ မြန်မာလူမျိုးများမှာ ရေကျော်၊ ပုဇွန်တောင်၊ စက်ဆန်း၊ အလုံ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ကမာရွတ် စသော ထိုထိုကာလ မြို့ဆင်ခြေဖုံးဟု ဆိုရမည်သော ရပ်ကွက်များတွင်သာ အနေများသည်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာလည်း ကုလားနှင့်တရုတ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ကုလားလူမျိုးများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အတော်များများကို စိုးမိုးချုပ်ကိုင်ထားသည်။ ကုလားလူမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်သူတို့လူမျိုးများကို မြန်မာလူမျိုးများ၏အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် မြန်မာလူမျိုးများ သူတို့နယ်မြေထဲသို့ ၀င်ရောက်ဗိုလ်မကျစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကုလားလူမိုက်ခေတ်ကို ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျော်ဇောထင်ရှားသည့်ကုလားလူမိုက် ခေါင်းဆောင်မှာ မတ်စတီးခန်း။ လူက မောင်ထော်လေးလမ်းမှာ နေထိုင်သည်။ ချမ်းသာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်၍ ထိုစဉ်ကာလ နယ်ချဲ့တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ၀င်ဆန့်သူဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ပုလိပ်မင်းကြီးအထိ ပေါက်ရောက်သည်။ မက်စတီးခန်းက စတီးဘရားသားနှင့်ဆက်နွယ်သည့် စပါးအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းကြီးကို လုပ်ကိုင်နေသူ။ စပါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ အဓိကကျသည့် စီ၊ ဘီ များ ပိုင်ဆိုင်သူ။ ကမာရွတ်တွင်ရှိသည့် မတ်စတီးဈေးကြီးကို ပိုင်ဆိုင်သူ။ ကြည့်မြင်တိုင် ဈေးကြီးလမ်းဟု အစွဲပြုခေါ်ဝေါ်ရသည့် စူရတီဘဇားဈေးကြီး၏အစုရှယ်ယာ ပိုင်ရှင်။ အစဦးပိုင်းက သူ၏လုပ်ငန်းများကို အကာအကွယ်ရဖို့အတွက် ကုလားလူမိုက်များကို လက်သပ်မွေးထားခဲ့သည်။ ထိုမှ တစ်စတစ်စ တပည့်တပန်းတွေများလာပြီး လူမိုက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံလာရသည်မှ နေရာတကာတွင် သြဇာသက်ရောက်မှုကို မိန့်မောလာသည်။ ကုလားသူဌေးများထံမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအစ ဆက်ကြေးပါပေးပြီး သူ၏အကူအညီကို ရယူလာကြရသည်။ နေရာတကာမှာ ၀င်ဆန့်သူဖြစ်လာသည်။ ထိုအပေါ်တွင် သာယာမိန့်မောလာသည်။ တကယ်တော့ သူက ကိုယ်တိုင်လုပ်ရဲ၊ ကိုင်ရဲ သတ္တိကောင်း၍ ထင်ပေါ်လာသူဖြစ်လာသည် မဟုတ်။ တပည့်တပန်း အသိုင်းအ၀ိုင်းကောင်းခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်သူအပိုင်းအထိ ၀င်ဆန့်သောကြောင့် ထင်ပေါ်လာသူ ဖြစ်လာသည်ပါ။ စပတ်လမ်း(ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း) မှ သိမ်ကြီးဈေးအထိ သူ့ပိုင်နက်နယ်မြေဖြစ်လာသည်။ သူကြီးစိုးထားသည့် နယ်ပယ်အဖြစ် ထင်ရှားလာသည်။ မတ်စတီးခန်း၏ အရှိန်အ၀ါမှာလည်း တောက်ထင်လာသည်။ သူ၏ အမည်မှာ အကျော်ဒေးယျ ဖြစ်လာသည်။ အုပ်စိုးသည့်အင်္ဂလိပ်တို့က သူတို့၏စစ်ဗိုလ်ကြီးအမည်ကို အစွဲပြု၍ ပေးထားသည့်လမ်းအမည်သည်ပင် သူ၏အမည်နှင့်အစားထိုးအသိအမှတ်ပြုခံလာရသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့ပေးထားသည့် လမ်းအမည် "စတင်းမောင်ထော်လေးလမ်း" နောက်ပိုင်း လူအများ၏အသိအမှတ်ပြု ခေါ်ဝေါ်လာသည့်လမ်းအမည်မှာ "မတ်စတီးလမ်း " သူနေထိုင်သည့်လမ်းကို သူ၏အမည်ဖြင့် အခေါ်အဝေါ်ပြုလာသည့်အထိ သူ၏အရှိန်အ၀ါ တောက်ထည်လာသည်။ သူက အနေအထိုင် အလွန်ထည်ဝါသည်။ ဂျိမ်းစဘွန်းဇာတ်ကားတွင်ပါဝင်သည့် ရွှေဦးထုပ်မျိုးကို သူက အဲ့ဒီကတည်းက ဆောင်းခံသူပါ။ တကယ် ဟုတ် မဟုတ်ဆိုသည်ကိုတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်။ ရွှေဦးထုပ်ဆောင်းသည်ဟု ပြောစမှတ်စကား ဖြစ်တည်ခဲ့သည်။ သူညနေဘက် လေညင်းခံထွက်သည့်အခါ မြင်းလေးကောင်တပ်ဒေါက်တပ်ရထားကြီးစီး၍ လေညင်းခံထွက်သည်။ ထိုခေတ်က မော်တော်ကားစီးနိုင်သည်ထက် ဒေါက်ကပ်စီးနိုင်သည်ကပို၍ ဂုဏ်ရှိန်မြင့်ထည်သည်။ မော်တော်ကားထက် မြင်းလေးကောင်တပ်ဒေါက်တပ်က ပို၍ စရိတ်က ကြီးမြင့်သည်။ လူအများ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ပိုမိုခံရ၍ အထင်ကြီးမှုကိုလည်း ပို၍ ခံရသည်။ သူ၏ဒေါက်ကပ်မောင်းသူမှာ မဟာရာဂျာစော်ဘွားများ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံမျိုး ၀တ်ဆင်၍လည်းကောင်း၊ ဥရောပတိုက်သားတို့၏ ခန့်ထည်သော ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံမျိုး ၀တ်ဆင်၍လည်းကောင်း ၀တ်စားဆင်ယင်ပြီး မောင်းရသည်။ ဒေါက်ကပ်မောင်းသူကား အဲဒီလောက် ထည်ဝါနေမှတော့ ဒေါက်ကပ်စီးသူ ဘယ်လောက် ထည်ဝါနေလိမ့်မည်ကို အထူးပြောစရာမလိုအောင် ထည်ဝါနေလိမ့်မသည်သာပါ။ တစ်ခါတရံ အမိုးဖွင့်ကားကို စီး၍လည်း ကန်တော်ကြီးကို ပတ်၍လည်း လေညှင်းခံတတ်လေ့ရှိသည်။ လူမိုက်ဘွဲ့ခံ မတ်စတီးခန်းက အဲဒီလိုမျိုး အနေအထိုင် ထည်ဝါသူဖြစ်၏။ တောင်းမှာအကွပ်၊ လူမှာ အ၀တ် ဆိုရိုးစကားရှိသည်။ သူက ငွေဖလားကို ရွှေနားကွပ်အဆင့်၊ ထိုထက်သာလွန်၍ ရွှေဖလားကို စိန်နားကွပ်သူပါ။ မတ်စတီးခန်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်လူမိုက်ဘွဲ့ခံ ကုလားသူဌေးမှာ မန်မဆာ။ မန်မဆာက မတ်စတီးခန်းလောက် နာမည်သတင်း အရှိန်အ၀ါကြီးသော်လည်း ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းမှာ သူကလည်း တစ်ဗိုလ်တစ်မင်း လုပ်နေနိုင်သူဖြစ်၏။ သော်မဆင်မှာ တိုက်တာနှင့်အကျအန နေသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြေးဆွဲနေသည့် ရထားလုံးအများအပြား ပိုင်ဆိုင်သည်။ ခေတ်အခါလိုက် ဂုဏ်ရည်လည်သူများ နေထိုင်သည့် သော်မဆင်နှင့် ဗိုလတစ်ထောင်မှာ အငှားချထားသည့် တိုက်တာအိမ်ခြေများ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ပြေးဆွဲနေသည့် ရထားလုံးလုပ်ငန်းအတွက် တပည့်လူမိုက်မွေးရင်းကနေ နောက်ပိုင်း ကိုယ်တိုင် လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသူ။ မတ်စတီးခန်းလောက် မကျော်ကြားပေမယ့် မန်မဆာဆိုသည့် နာမည် အသိအမှတ်ပြုခံရလောက်အောင်တော့ ထင်ပေါ်ခဲ့သည်။ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်လူမိုက်ဘွဲ့ခံခဲ့သည်မှာ စတီးစကင်းခန်တို့ မန်မဆာတို့နှင့်ဆက်နွယ်သော အကြောင်းအခြေခံလည်း ပါသည်။ ကုလားလူမိုက်များ ရန်ကုန်မြို့ကို ခါးဆောင်းတင်ပြီး စိုးမိုးခြယ်လှယ် နေသည်ကို ဖိုးတုတ်က မခံချင်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ သွေးမကောင်းလို့ သတ္တိနည်းလို့ သူတို့က ဗိုလ်ကျခွင့်ရနေတာလား။ မြန်မာလူမိုက်တွေ ရှိပါလျက်ကနဲ့ ကိုယ့်ရပ်ကွက်လောက်မှာဘဲ နယ်ကျဉ်းခံပြီး နေနေတာ သူတို့အရှိန်အ၀ါကို ကြောက်လို့လား။ မတ်စတီးခန်းတို့ နယ်မြေထဲကို ဘာလို့ မတိုးရဲတာလဲ။ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်က ဒါကို မကျေနပ်ခံပြင်းသည့် စိတ်ဓါတ်အခြေခံနှင့် လူမိုက်လောကထဲသို့ တိုးဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မတ်စတီးခန်း၏ ညာလက်ရုံးနာမည်ကြီး ကုလားလူမိုက် တစ်ယောက် ဖြစ်သူ မာမွတ်ကို စပြီးဖြိုခဲ့သည်။ ပန်းဆိုးတန်းနှင့် မဂိုလမ်းကြား နယ်မြေမှာက မာမွတ်ကို ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ကြရသည်။ မာမွတ်က မတ်စတီးခန်း လက်ထက်မတိုင်မီကတည်းက လူမိုက်အဖြစ် ကြီးစိုးနေသူ။ နောက်ပိုင်း မတ်စတီးခန်းက လက်ရုံးတပည့်အဖြစ် မွေးလိုက်ရာမှ ဆရာဖြစ်သူ၏အရှိန်အ၀ါနှင့် ပို၍ ဇက်ရဲ လက်ရဲ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးလာသည်။ ကိုဖိုးတုတ်က နောင်သူ့တပည့်ဖြစ်လာသူ သောင်းတင်ဆိုသူနှင့် နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး မာမွတ်နယ်မြေ ပန်းဆိုးတန်းသို့ ၀င်၍ မူလီခေါင်းတပ် ကြိမ်တုတ်နှင့် မှတ်လောက် သားလောက်ဖြစ်အောင် နှက်ခဲ့သည်။ မာမွတ်က သူ့ကို ဘယ်သူဝင်နှက်သွားမှန်းပင် မသိလိုက်။ ကိုဖိုးတုတ်ကလည်း နာမည်မခံ။ ခံလို့လည်း မဖြစ်။ မတ်စတီးခန်းက ပုလိပ်အဖွဲ့အပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှ ရှိနေသောကြောင့် နာမည်မခံရဲ။ ထို့ကြောင့် . . . ကိုဖိုးတုတ်က ပေါ်ထင်ရေးကို ဦးမတည်ဘဲ လုပ်စရာရှိတာကို သိုသိုသိပ်သိပ် ပိပိရိရိ လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ခံလှည့်မရှိ။ လုပ်လှည့်သာရှိခဲ့သည့် မာမွတ်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ခံချက်နှင့် ကြုံတွေ့လိုက်ရသည့်အခါ ဖျားသွားသည်။ ဗိုလ်ကျသည့် ထီမထင်လုပ်ရပ်များ အရှိန်တန့်သွားသည်။ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်က သည်နည်းဖြင့် သူတို့အုပ်စုဝင် လူမိုက်များက တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဖြိုခဲ့သည်။.(. အပိုင်းများခွဲ၍ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်) ဗေဒါလမ်း ဖေ့ဘုတ်မှ
ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ကမ္ဘာကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အတွေး အမြင်
(၃) ဗုဒ္ဓနှင့် သာမန်လူသားတစ်ဦး၏ ကွဲပြားချက်မှာ လူကောင်းနှင့် အရူးကွဲပြားသကဲ့သို့ပင်ြ...ဖစ်သည်။ (စာရေးဆရာတစ်ဦး)
အရှင်သုခမိန္ဒ (စဝ်ဆုခမ်း) နှင့်အရှင်ဝိဇယ ရေးသားပြုစုထားသော " ဗုဒ္ဓအနု ပညာပြခန်း " စာအုပ်မှ
Posted by linnzawhtike at 4/01/20130comments